क्षेत्रीय भाषा उपकरण, ग्रामीण भाषा विज्ञान उपकरण, अल्पसंख्यक भाषाहरु उपकरण।
हाम्रो नि: शुल्क भाषा उपकरण अनुवाद काम देखि भिन्न छ। वेबसाइटहरूको सामग्री अनुवाद योग्य छन्। तर वेबसाइटहरूको URL हरू अंग्रेजीमा छन् जुन अन्य भाषाहरूमा अनुवाद योग्य छैन। हाम्रो भाषा उपकरणले यसको लागि विश्वव्यापी समाधान प्रदान गर्दछ।
वेबसाइटहरूको URL अंग्रेजीमा छन्। त्यसैले, गैर-अंग्रेजी, ग्रामीण र क्षेत्रीय व्यक्तिहरूले वेब साइटहरू खोल्न सक्दैनन्। हाम्रो भाषा उपकरण तिनीहरूको लागि उत्तम आविष्कार हो।
1. क्षेत्रीय भाषा प्रयोगकर्ताहरूले मात्र एकपटक मात्र मद्दत गर्न वेबपृष्ठ पाउनेछन्।
2. त्यसो भए उनीहरूले आफ्नै हातबाट वेबसाइटहरू खोल्न सक्छन्
3. उनीहरूले ठेगाना पट्टी टाइप गर्दछन् ppooii Ctrl + प्रविष्टि साइट खुला हुनेछ वा ooiiuu.com आदि (कुनै पनि3कुञ्जी, दायाँ बायाँ, दोहोरो, किबोर्डमा सँगै छन्।)
4. सरकार र वेबसाइट मालिकहरूले हाम्रो कोडलाई आफ्नै वेबसाइटमा टाँस्न सक्दछ।
वेबसाइटहरूको लागि हाम्रो भाषा उपकरणले निम्न काम गर्दछ।
1. --body-- ट्यागमा तपाईंको आफ्नै वेबसाइटमा प्रतिलिपि र पेस्ट कोड। अपलोड गर्नुहोस्
2. आफ्नो टाँस्ने वेबसाइट आफ्नो ब्राउजरमा कोड टाँसिन पछि एक पटकको लागि खोल्नुहोस्।
3. अब टाइप ठेगाना पप ppooii.com वा (ooiiuu र Ctrl + Enter) टाइप गर्नुहोस्। वेब साइट खुला हुनेछ। किबोर्ड तस्वीर हेर्नुहोस्
हाम्रो भाषा उपकरण मान्छेका लागि निम्न कार्य गर्दछ।
1. अब टाइप ठेगाना पप ppooii.com वा (ooiiuu र Ctrl + Enter) टाइप गर्नुहोस्। वेब साइट खुला हुनेछ। किबोर्ड तस्वीर हेर्नुहोस्
2. कुनै3कुञ्जीहरू, दाहिने बायाँ, दोहोरो, किबोर्डमा सँगै हुन्छन्।
नमूना र कोड 1
नमूना र कोड 2
नमूना र कोड 3